लुम्बिनी विकास बैंकको नाफा ५८ करोडभन्दा बढी
साउन २८, काठमाडौं (अस) । लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेडले गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को अन्त्यसम्म रू. ५८ करोड ९७ लाख १ हजार खुद नाफा गरेको छ । कम्पनीले मंगलवार गत वर्षको चौंथो त्रैमासको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको हो । उक्त विवरण अनुसार अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष ९६ दशमलव ७७ प्रतिशत बढी नाफा भएको देखिन्छ ।
गत वर्ष सञ्चालन नाफा ७१ प्रतिशत बढी रू. ७४ करोड ४५ लाख ५५ हजार भएको छ । यस अवधिमा कम्पनीले रू. १३ करोड ४८ लाख २५ हजार खराब कर्जा उठाएको छ । अघिल्लो वर्ष रू. १ करोड ७० लाख २७ हजार मात्र खराब कर्जा उठेको थियो । यस अवधिसम्म कम्पनीको चुक्तापूँजी रू. २ अर्ब २० करोड ९७ लाख ६६ हजार पुगेको छ । जगेडा कोषमा रू. १ अर्ब ६३ करोड ६६ लाख ४० हजार रहेको छ ।
अघिल्लो वर्षभन्दा ८ दशमलव ८८ प्रतिशत बढी रू. २४ अर्ब ८० करोड ६२ लाख ३३ हजार निक्षेप संकलन गरेको कम्पनीले २३ दशमलव ८४ प्रतिशत बढी रू. २२ अर्ब ७६ करोड ९९ लाख ८३ हजार कर्जा प्रवाह गरेको छ । कम्पनीको वार्षिक प्रतिशेयर आम्दानी रू. २६ दशमलव ६८ रहेको छ ।
हिमालयन जनरल र प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्सको साधारण सभा सोमवार हुँदै[२०७७ असार, २८]
एनआइबिएल एस क्यापिटलद्वारा डिम्याट खाता नविकरण गर्न अनुरोध[२०७७ असार, २८]
एनआरएन लघुवित्तको एकीकृत कारोबार असार २९ गतेदेखि [२०७७ असार, २८]
देवः विकास बैंकलाई प्राप्ति गर्दै कुमारी बैंकले आजदेखि शुरु गर्‍यो एकीकृत कारोबार [२०७७ असार, २८]
करीब ६ अर्ब बराबरको आईपीओ विक्री हुँदै [२०७७ असार, २७]
अरुण तेस्रो जलविद्युत्ले भुक्तानी नदिएको निर्माण व्यवसायीको गुनासो
हिमालयन जनरल र प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्सको साधारण सभा सोमवार हुँदै
एनआइबिएल एस क्यापिटलद्वारा डिम्याट खाता नविकरण गर्न अनुरोध
एनआरएन लघुवित्तको एकीकृत कारोबार असार २९ गतेदेखि
देवः विकास बैंकलाई प्राप्ति गर्दै कुमारी बैंकले आजदेखि शुरु गर्‍यो एकीकृत कारोबार